‘आन्दोलन बलियो बनाउन तपाइ हामी सबै लाग्नुपर्छ’ — News of The World
'हिजो हामीले कामरेड निर्माणलाई देवता भन्यौ, रिस उठेपछि राक्षस भन्यौं ।'
संसार न्यूज संवाददातासाउन २०, २०७३
‘कामरेड, हेर्नुस त त्यो मुन्छे मंचमा छ त त्यहि पनि दोश्रो रोमा, बावरे कसरी आइपुग्यो त्यहाँ ?” कामरेड बन्धुले खुसुक्क सोधिन ।
”ल आयो त अस्ति भर्खर पार्टी एकताको १० टुक्रामध्ये १ टुक्राको वरिठ नेता भएको थियो । औपचारिक प्रक्रियामै आएको हो नी !” कामरेड सुमनले स्मरण गराए ।
”मान्छे तस्करी गरेर जेल परेको मुन्छे हो कामरेड त्यो । ३ पटकसम्म गैरकानुनी काम र नक्कली कागज बनाएको आरोपमा पक्राउ खाएको मुन्छे हो,” अचम्मै लाग्यो । कहिले पार्टी खोल्न भ्याउनु भएछ !” कमरेड बन्धुले फेरि जिज्ञासा राखिन् ।
”उसैले पार्टी खोलेको होइन के, दश टुक्रामध्य कमरेड सुवासले नेतृत्व गरेको पार्टीमा उहाँ पछाडि दोस्रो मुन्छे भएको रहेछ । उहाँको पार्टी र अफिस उसैले टिकाइदिएको रहेछ, अनि आउदैनत ! कमरेड सुवास सचिवालयमा आउनु भो, उ चाँहि पोलिटव्यूरोमा सजिलै आउने भयो नी ! कामरेड सुमनले बेलिविस्तार लगाए ।
“ए–ए तपाइ म जनयूद्धकालदेखि लगातार काम ग¥यौं, जेल यातना सबै खायौं हामी अबदर्शकको दर्शक, झोलेको झोलै होइन कामरेड !” कमरेड बन्धुले फेरि भनिन् ।
“त्यो मुन्छे पनि त ३ पटक जेल परेको रहेछ नी ! कसरी जेल परेको भन्नु ठूलो भएन कमरेड, म २ पटक परे., उ ३ पटक परेको रहेछ त, उसले पाउनु परेन…” कठोर व्यंगमा कामरेड सुमनले बन्धुलाई सुनाए ।
“ल अब कार्यक्रम हुरु हुन्छ नेताहरुको कुरो पनि त सुन्नु प¥यो नी !” कामरेड सुमनले ध्यानाकर्षण गराउन खोजे ।
“प्रदेश एकता सभा शुरु भयो, अब कमरेड७ नं ले आफ्ना कुरा राख्नु हुन्छ” कमरेड उद्घोषकले जानकारी दिए ।
“त्यो पानी र आन्दोलनपुनगर्ठन एतिहासिक मोडमा भएको कामरेड । हिजो हामीले कामरेड निर्माणलाई देवता भन्यौ, रिस उठेपछि राक्षस भन्यौं । वास्तवमा यो आन्दोलनको सच्चा नायक उहाँ नै रहेछ, उहाँसँग अलौकिक शक्ति रहेछ…” सहभागीहरुलाई हसाउँदै ७ नं कामरेडले मन्तव्य राखे ।
“कमरेड निर्माणको महत्व विशिष्ठ घडीमा देखिने रहेछ कामरेड, ल हेर्नुस त आज भत्केका र बिग्रेका सबै मनलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिनु भयो ….” छन कामरेडले निर्माणको महत्वबारे व्याख्या गरे ।
“कामरेडहरु आज हामी सबै उत्साहित छौं । सबैको मनोबल बढ्दै गएको छ । एकजुट हुँदैछौं । हिजो जे जति गल्ती ग¥यौं, सबैले महसुस गर्दैछौं । यो सबै प्रक्रियाको नायक कमरेड निर्माण नै हो, उहाँ नै रहेछ एक…! लय मिलाउँदै ५ नम्बरमा रहेका वरिष्ठ सचिवालय सदस्य कामरेड रोइनले भनाइ राखे ।
“कमजोरी सबैले गरेका छौ । तर कमरेड निर्माणले मात्रै आत्मालोचना किन ? मुख्य नेतृत्वलाई आलोचना मात्र गराएर अरुको मन हास्ने त होइन होला, कामरेड निर्माणले पनि यो कुरो बुझिदिनु प¥यो की आफ्नो मात्रै स्वआलोचनाले पार्टी पूर्ननिर्माण हुँदैन। सबैको उस्तै प्रक्रिया हुनुपर्दछ । सचिवालयका अर्का वरिष्ठ कमरेड अवसरले भाइ राखे ।
“विभिन्न कारणले विभाजित भएका क्रान्तिकारीहरु अब एकताबद्ध भएका छौं, हाम्रो यो भेला र एकता आफैले पनि नयाँ क्रान्तिको थालनी गरेको छ । क्रान्तिकारी पूर्णता दिने सैद्यान्तिक सहमति पछि मात्र हामी नयाँ पक्रियामा आएका हौं र यसको गति रोकिदैन, क्रान्तिको बाँकी कामलाई पूर्णता दिन नपाइ हामी सबै दृढतापूर्वक लागौ…”वरिष्ठ नेता कामरेड आकाशले भनाइ राखे ।
“हामीले एकता त गरेका छौं कामरेडहरु, हाम्रो मात्रै एकताले पुग्नेवाला छैन । जनतासँग एकता कसरी गर्ने, कार्यनीति त्यतातर्फ सोझाउन सक्यौ भने मात्र हाम्रो एकताको अर्थ रहन्छ, अब हामी जनतासँगको ग्यापलाई कसरी मिलाउने ? त्यतातर्फ सोचों” सचिवालयमा दोश्रो वरियताका वरिष्ठ नेता कामरेड उज्वलले भनाइ राखे ।
“पार्टी एकतापछि हामीलाई ठूलो अबसर प्राप्त भएको छ र सँगसँगै चुनौती पनि थपिएको छ । संभावनाको भरपुर प्रयोग गर्दै र चुनौतीलाई प्रतिवाद गर्दै अघि बढौं, माओवादी केन्द्रले जनतामा जाने प्रक्रिया अब थालिसकेको छ अब हामीलाई कसैले रोक्न सक्तैन । जनताको मन जितेर अब झन बलियो हुँदै पहिलो पार्टी बन्ने काममा हामी लाग्नैपर्छ…” कमरेड निर्माणले मुख्य मंतव्यमा कुरो राखे ।
“एकताको कुरो पनि आयो, १ नम्बर बनाउने कुरो पनि आयो, जनतामा जाने कुरो पनि भयो तर कसरी जाने ? के लिएर जाने ? कस्तो मुख लिएर जाने ? केही कुरो आएन कामरेड ।” सहभागीहरुमध्येबाट धक फुकाएर कामरेड मन बहादुरले उद्घोषकलाई चीट पठाए ।
“कामरेडहरुका खुल्दुली र जिज्ञासा धेरै थिए, यहाँ चिटहरु पनि आएका छन् कमरेडहरुलाई बोल्ने मन पनि थियो तर के गर्नु आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रक्रिया नै “एकातर्फी” जस्तो हो, तथापि प्रदेश संयोजक कमरेड दीर्घले समापन मंतव्यमा केही कुरा राख्नु हुने नै छ” कामरेड उद्घोषकले समापनका लागि अनुरोध गरे ।
“एकता फुल फेरि एकताको औचित्य र आन्दोलन पुर्नगठन पछाडि नीति, विधि र पद्दति बाउने कुरो प्रष्ट आएको छैन । भावना र बाध्यताको एकताले मात्र संगठनको प्रक्रिया बैज्ञानिक हुन्छ भन्ने स्थिति छैन । त्यसका लागि धेरै बहस हुन जरुरी छ । यसलाई सुरुवात ठान्यौं भने केही हुन्छ नै कामरेडहरु…पार्टी र आन्दोलन बलियो बनाउन तपाइ हामी सबैले दिमाग खियाउनुपर्छ…” उद्घोषक कामरेडले कुरो राख्दै गए । मंचमा बसेका केही पात्र तर्फ हेर्दै कामरेड बन्धुले जिब्रो टोके ।
ऐक्यबद्धता मासिकको असार अंकमा प्रकाशित शन्तोष शर्माको कामरेडको नेपालपथ